Ny tsy adino amin'ny dia ~ Journey-Assist - zavatra 10 ilaina isaky ny dia
Pejy fandraisana » Torohevitra mahasoa Travel » Inona no tsy adino amin'ny dia?
10 zavatra mila halehanao. (Aza adino!)
Tokony halaina miaraka aminao izany, na inona na inona karazana fialan-tsasatra nokasaina - beach, tanàna na mavitrika. Tsy mila olona na iza na iza mandeha amin'ny kitapo izy. Na izany aza, ny ankamaroan'ny mpizahatany dia aleony kitapo kely fa tsy kitapo feno, fa mandritra izany fotoana izany, matetika izy ireo dia voatery miverina avy amin'ny fitsangatsanganana feno kitapo feno izay mandray ny tanany.
Mba hiarovana ny malalanao amin'ny halatra, dia afaka mampiasa padlock tsotra ianao (miaraka amin'ny lakile tsara kokoa noho ny code), izay tsy mamela ny mpiantsena miasa eo amin'ny seranam-piaramanidina mba hiditra ao anatin'ny valizy ho an'ny olon-kafa, fa tsy hanampy izany raha ny tompon'ilay valizy dia mihidy ny tenany ary tsy mijery azy. Ho an'ireo tranga ireo, ny fivarotidin'ny fizahantany dia misy fanairana izay voageja rehefa manandrana mamadika ny valizy ianao. Safidy iray hafa dia kitapo voaaro tsy azo esorina, nosokafana amin'ny zipper ary amin'ny ankapobeny dia miditra ao an-toeran-kafa.
Ny hevitra mandrara toy izany, toy ny fisintonana sarintany an-tserasera amin'ny findainao ary ny fampiasanao ilay navigateur tsy misy Internet, noho ny antony tsy fantatra, dia tsy mitsidika mpizahatany maro. Saingy, amin'ny fampiharana maro toy izany (na dia lafo aza izy ireo) dia misy ihany koa torolalana miorina amin'ny toerana mahaliana. Eto amin'ity pejy ity, ao amin'ny "Rindrambaiko fitsangatsanganana“, Azonao atao ny mamantatra tsara ny fampiharana toy izany.